I-ANP kaYohn de Mol, iMvume yoVavanyo, isigaba sebango lesigunyaziso se-2: I-Rosmalen Nedland Bayliffs BV: UMartin Vrijland
I-ANP kaYohn Mol, iMvume yoVavanyo, ibango lemvume ye-2: I-Rosmalen Nedland AbaGerechtsdeurwaarders BV
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-18 Septemba 2018	• 7 Comments
Ukuba usebenzisa indlela ANP kaJohn de Mol efunyenwe apha kwisayithi, uye wakwazi ukulandela indlela inkampani inika ngayo amalungelo amaphepha-mvume elayisenisi ye-Permission kwizonyango zokusetyenziswa kakubi kwezithombe ngamanqaku. Ubuye ufunde iimpendulo zam kule nto (jonga apha).
Sifakwe kwisigaba esilandelayo, kuba yilapho i-ANP kaJohn de Mol ibenze iofisi yomsizi-mali. Konke oku kudlulayo kwi-Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV Kwii-imeyile ezifunyenwe yimi kubonakala ukuba abantu abaninzi banamava amaninzi kwaye ezinye iiblogi zokuzilibazisa ziye zashiya ngokupheleleyo iwebhusayithi yazo ngenxa yokwesaba amabango. Abanye baye baphela kwizigwegwe ezixabisekileyo. Ukuba uba ilungu ngendlela yobulungu obukhethekileyo, ungangena eli nqaku sifunde ukuba ndifumene njani isisombululo sokuthintela amabango omva we-billionaire uJohn de Mol. Ngokuqinisekileyo, asinako ukubeka kakubi uYohn ohluphekileyo ngokuziqhelanisa nale miqhinga. Ngokuqinisekileyo kufuneka uqaphele abancinci njengababhiliyoni.
Funda incwadi yokuqala endiyifumana kwiBramalen Nedland Bayliffs apha:
Uya kufumana impendulo kule leta yokuqala evela eRosmalen Nedland esi sixhobo. Ewe, uRossmal Nedland ibhiliyaliire uJohn kufuneka abonise ukuba uqhubeka nokukhwabanisa kwaye unokuzimela ukuba uqhubeke. Emva koko ndafumana ileta yesibini:
Kakade ndiphendule kule nto. Zifundele:
Andikufumani kwindlela yakho yokuziphatha okanye ye-ANP. Okokuqala, isiphakamiso senziwe nguMshishini weMvume. Isiphakamiso sishiya kwindawo yokuthetha, kodwa ukubhala kwakho kubonisa kwakhona ukuba le ndawo ayinikezwa. Ukongezelela koko, xa kwenzeka nayiphi na into yokuphikisana nesiphakamiso, ngokukhawuleza kugqiba ukuba kuphela i-1 inketho ehleliyo, okokuba ixabiso elipheleleyo linokuthi lithathwe. Andivumelani nesiphakamiso seMvume yeMvume kwaye andisayi.
Mhlawumbi ndikuthumelele isiphakamiso kwaye uyayinqabela lesi siphakamiso okanye ufike ngesiphakamiso sokuphikisa; ngaba oko kungenza ukuba ndifune ngokukhawuleza isiphakamiso sokuqala? Nombolo. Emva koko andifanele ndiyibize ngokuthi isiphakamiso. Isiphakamiso sishiya kwigumbi lokuxoxisana. Leyo yintetho yegama elithi 'isiphakamiso'.
Andizange babesazi nawuphi na umthetho eyenza kube lula ukuba kuvunwe ekuqhutyweni ANP okanye Imvume ngomatshini, kungenjalo ke soze kunjalo wasebenzisa imifanekiso ukuphuhlisa amanqaku zam. Ukuba i-ANP okanye iMashishini yeMvume indixelele ukuba kukho amalungelo okusebenzisa iifoto, ndandithatha ukuthatha isenzo sokuqala. Ngakolunye uhlangothi, akukho nto iwake yavelelwa kulolu hlobo iminyaka. Ukuba ndizange ndive umqondiso kweso sihlandlo, ukuphindaphinda kwakunqandwa. Oku bekuqinisekisile ukuba, ngoko ke, kuninzi bekukho kuphela ukungaqondi kakuhle. Ngomnye u-ANP kunye noMvume woMvume, ngokusobala, ngokuqinisekileyo wayelibazise ngokucacileyo icala kwaye walihlehlisela ukuba iifoto ezongezelelweyo zisetyenziswe "ngokungekho mthethweni". Ngenxa yoko, yonke ikhosi yeziganeko zitshitshisa ukunyathela, oku kuye kwalindelwe kwaze kwafunyanwa amawaka angamawaka e-euro.
I bafuna ukuba nilenze ibango kwaye ubonise imifanekiso ntumekelelo apho abanye amalungelo ukususa, kodwa ke ufuna ukuba wena kunye Imvume Machine, njengoko ANP, le fomu ukhozo ukuphanga. Isenzo esilula sokukwazisa ngokufanelekileyo kwimimiselo sanele ngokwaneleyo ukukhusela ukuphulwa okungakumbi. Umntu ochaziweyo ubalwa ezimbini. Nangona kunjalo, akuzange kubekho isilumkiso. Ayikho i-ANP okanye iMashishini yokuVumela ayikho nantoni na. Andiyena igqwetha kwaye ngoko awukwazi ukulindela ukuba ndikwazi yonke into encinane okanye ulawulo ukusuka kwinani elikhulu lemithetho nemigaqo ngentliziyo. Ndakhe ndaqala ukubhala amanqaku njengomnyuzi kwaye akazange ndilandele naluphi na uqeqesho, ngoko ke ukuphendula okungafaniyo kulindela ukuba bekufuneka ukuba ndiyazi oku. Unokukwazi konke oku ukuba ufunde i-site yam.
Ndigcina imfuno yokuba ukhansele onke amabango kunye namabango kwaye ugcine nemfuneko yokuba uhlawulelwe iindleko zam. Wena, i-ANP kunye neMishini yoVavanyo iyakwenza iinqanaba lakho kwaye ungashiyi indawo yokuxoxisana. Kuyafana nangenye indlela ngeenxa zonke; ingaba ungayiphikisana nolu okanye awuphikisi. Ukuba ufuna ukucwangcisa oku, unokukwenza ngokuyeka ibango. Ndiza kukuhlawula zonke izibhengezo endizibophezelayo kweso sikhathi (ngokunjalo oku kubhaliweyo). Esi siphakamiso asikho isiphakamiso kwaye ke asiboneli ithuba lokugatywa okanye ukuxoxisana.
Isiphelo: ukuba ushiya ibango lakho kwaye uyeke ukunyathela kwakho, ndiya kushenxisa zonke iifoto ngokukhawuleza. Lo ngumsebenzi ogqithiseleyo wexesha apho andizange ndikwazi ukufumana ixesha leso sizathu, kuba kufuneka ndibe ngumbumba kakhulu kwi database ukuba ndibone iifoto kwaye ndizisuse ngesandla. Ndiza kuthatha elo thuba ngokukhawuleza ukuyeka izenzo zakho zokuphanga egameni le-ANP. Undiphoqelele kwi-indleko enkulu yokuhlamba indleko endingafuni ukwenza nantoni na. Andifuni ukuba ndijongane nale mi sebenzi engacacisiyo ye-billionaire uJohn de Mol, okanye eyakho. Yeka ngokukhawuleza!
Into Ulibele litsole elokuba kule imeyili Rosmalen Nedland iqhinga kunokuba balimala usebenza kwi email yakhe yokugqibela, ezizezi ngokufaka ileta unaddressed evela ANP nto leyo ebonisa ukuba ANP zase walumkisa ukusetyenziswa kwezithombe apho iilayisenisi ziya kuphumla khona. Le nqaku elibonakala likhawuleza, kodwa ke, alixilwanga kwaye ke alinanto. Ngaba sibona ubungqina obubi kunye nokukhohliswa ngokuphanga? Ndandithumele i-PS-wena. Khangela apha inqaku elingathintekiyo:
Sinokuthi oku a uDavide - umzabalazo Goliath phakathi intlebendwane egungxulweyo ngokupheleleyo nengenasihlahla kunye opprobrious efafazwe uMartin Vrijland kunye Billionaire kunye bazizityebi volksbeïnvloeder-Netherlands, uJohn de Mol. Ngoko ke ndikucela ukuba undixhase ngokuba ilungu, kuba uxinzelelo luya lukhulu kwaye lube lukhulu; ngenxa yolu hlobo lomsebenzi. Ndiyabonga kakhulu ngenkxaso yakho!
Ukuphendula kwi-ANP ye-ANP ye-ANP ye-copyright bounty Hunters PermissionMachine.com
AmaMaas emthethweni ngokuchasene namabango e-ANP kaYohn de Mol kunye ne-'Pounty Hunters 'Permission Machine.com
Ukuphendula kuMatshini Wokuvumela kwiifayile ze-copyright ze-ANP
Ukudala kwe-'Fuck Permission Machine Foundation 'yeFuck John de Mol'
I-ANP ithumela umrhumo obunzima kuMartin Vrijland ngenxa yeefayile zelungelo lelayisenisi yokuphula umthetho
tags: ANP, copyright, Kleyima, eziziimbalasane, iifoto, ukusebenzisa iifoto, john de mol, iimvume zelayisenisi, UMartin Vrijland, mvume yemvume
18 Septemba 2018 kwi-20: 09
UYohn, ndiyazi ukuba unyango lwakho lwe-botox lubiza kakhulu kwaye ukuba unyana wakho ufuna into engaphezulu kwebhokisi ye-peanut kwi-sandwich yakhe, kodwa awuhambanga ngoku kude?
18 Septemba 2018 kwi-20: 19
Ewe, ndambiza uTalpa ixesha elide ukuze ndifumane uJohn kwifowuni, kodwa ngokusobala akayi kubuyiselwa ukuba abuyele, nangona isicelo sokubuyiselwa kumbhali wakhe.
18 Septemba 2018 kwi-20: 16
Ngokuqinisekileyo ndiya kukuxhasa, kwaye ndiya kuqinisekisa ukuba zonke iintloni zinyamalala emahlombe akho.
Ulungile, mna we-ANP, u-Antie Nederlandse Partij uya kuqinisekisa ukuba andiyi kuba nefuthe kumaphephandaba aseDatshi nokwenza abantu baqonde ukuba kukho iiwebhusayithi ezifana nale.
Kuba oku mna ndibathabathile eqatha, Mna sele qhagamshelana noMnu Peter R. de Vries, ngubani na kumoshakele udade wam, ukuba uthembeke ngokupheleleyo, ukuba uthumele kum inombolo-akhawunti yakho yebhanki, thina ngabahlobo nje elungileyo.
Uhlobo oluvela kwiBlaricum.
18 Septemba 2018 kwi-20: 21
Yeyiphi indlela ekhangayo ngayo!
Ngaba ndinokufumana i-botox ekugqibeleni
18 Septemba 2018 kwi-20: 24
Iinkcukacha ezithembekileyo malunga nobudlelwane obukhulu phakathi kukaLinda noPeter R. de Vries andinomdla kum njengaye, kodwa ndiyayixabisa into yakho enkulu!
18 Septemba 2018 kwi-22: 08
Akukho mbulelo, siya kwilizwe lethu.
19 Septemba 2018 kwi-13: 00
Qinisa ndawonye! Iinkcukacha zeNtlalo Nederland and de Mol namhlanje kwijaji
« Ixesha lokuba yi-cyborgs yangempela!
Olandelayo uhamba kwiNicky Verstappen - Jos Brech psyop? Iifoto zoonografi ezitholakalayo! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.316.989
SalmonInClick op Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Riffian op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)
Riffian op Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?